Podophyllum Resin (ပိုဒိုဖိုက်လန် ရီစင်) - Hello Sayarwon
Podophyllum Resin (ပိုဒိုဖိုက်လန် ရီစင်)
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Podophyllum Resin (ပိုဒိုဖိုက်လန် ရီစင်)
Podophyllum Resin (ပိုဒိုဖိုက်လန် ရီစင်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Podophyllum Resin (ပိုဒိုဖိုက်လန် ရီစင်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Podophyllum Resin (ပိုဒိုဖိုက်လန် ရီစင်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Podophyllum resin သည် ကြွက်နို့ရောဂါကို ဖြစ်စေသည့် ဆဲလ်များကို သေစေသော ဆေးဖြစ်ပြီး လိင်အင်္ဂါတွင်ဖြစ်သော ကြွက်နို့ရောဂါအတွက်အများဆုံးအသုံးပြုကြသည်။
မှာ လည်ချောင်းနှင့် ခံတွင်းထဲတွင် ကူးစက်ရောဂါကို ဖြစ်စေသော ပိုးကောင်ငယ်များကို သေစေသည့် ပိုးသတ်ဆေးအနေနှင့် အသုံးပြုကြသည်။ အများအားဖြင့် Podophyllum resin ကို လည်ချောင်းနာခြင်းကို ကုသရန်သုံးပါသည်။
Podophyllum Resin (ပိုဒိုဖိုက်လန် ရီစင်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Podophyllum resin ကို အများအားဖြင့် ဆေရုံဆေးခန်းများတွင် ဆရာဝန် များက လိမ်းပေးကြပါသည်။ အကယ်၍ အိမ်မှာ လိမ်းမည်ဆိုလျှင် ဆရာဝန် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း အသုံးပြုရန် လိုအပ်ပါသည်။
ဆေးကို ရောဂါဖြစ်သော နေရာတွင်လိမ်းပါ။ ဆေးလိမ်းသည့်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မလိုအပ်သောနေရာများကို ဆေးထိမိခြင်းမှ ရှောင်ကျဉ်နိုင်ပါသည်။ ကျန်းမာသော အရေပြားနှင့် မထိမိအောင် လိမ်းပါ။ ဆေးလိမ်းပြီးလျှင် အခြောက်ခံထားပါ။
အချိန်တစ်ခုကြာအောင်ထားပြီးလျှင် ခြောက်နေသော ဆေးနေရာကို အရက်ပြန် သို့မဟုတ် ဆပ်ပြာကို အသုံးပြုပြီး သင့်ဆရာဝန် ပြောသည့်အတိုင်း ဖယ်ရှားသန့်စင်ပေးပါ။
ဆေးအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မရှင်းလင်းသည်များရှိလျှင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူ သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Podophyllum Resin (ပိုဒိုဖိုက်လန် ရီစင်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Podophyllum resin ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Podophyllum resin ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Podophyllum resin
Podophyllum resin ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Podophyllum resin ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Podophyllum Resin (ပိုဒိုဖိုက်လန် ရီစင်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Podophyllum resin သည် လိမ်းဆေးသာဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဆေးကို မျက်လုံးများ၊ နှာခေါင်းနှင့် ပါးစပ်ထဲသို့ မဝင်ပါစေနှင့်။ ဝင်သွားလျှင် ရေအေးဖြင့် ချက်ချင်းဆေးထုတ်ပစ်ပါ။
ထိုဆေးကို သွေးထွက်နေသော ကြွက်နို့များ၊ အမွှေးများပေါက်နေသော ကြွက်နို့များ၊ မှဲ့များနှင့် မွေးရာပါအမှတ်များပေါ်တွင် မလိမ်းပါနှင့်။
ကြွက်နို့သည် ကုသမှုတစ်စုံတစ်ခုကို ခံယူရန် အစီအစဉ်ရှိပါလျှင်၊ သို့မဟုတ် ပတ်ပတ်လည်ရှိ အရေပြားတွင် အနာများဖြစ်နေလျှင် ထိုဆေးကို မလိမ်းရပါ။
ဆေးလိမ်းလျှင် နေရာအများကြီး သို့မဟုတ် ကြွက်နို့များအားလုံးကို တပြိုင်နက်တည်း မလိမ်းရပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Podophyllum Resin (ပိုဒိုဖိုက်လန် ရီစင်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် X ရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားသည်။
Podophyllum Resin (ပိုဒိုဖိုက်လန် ရီစင်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဆေးတိုင်းသည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ခံစားရနိုင်သော်လည်းလူတဦးနှင့်တဦးအပေါ်မူတည်ပြီး မတူညီပါ။ သင်ဆေးလိမ်းလိုက်သော နေရာတွင် ယားယံခြင်း၊ နီရဲခြင်းများဖြစ်လာပါက ဆရာဝန်နှင့် ပြသပါ။
အရေပြား၊ လက်၊ ခြေထောက်တို့တွင် ထုံကျဉ်ခြင်း၊ မီးစနှင့် ထိုးသလို ပူခြင်း
ဖျားခြင်း၊ ချမ်းတုန်ခြင်း၊ လည်ချောင်း အဆက်မပြတ်နာနေခြင်း
ဘယ်ဆေးတွေက Podophyllum Resin (ပိုဒိုဖိုက်လန် ရီစင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Podophyllum resin ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ အထူးသဖြင့် စတီးရွိုက်အရောင်ကျဆေးများသည် Podophyllum resin ဆေး၏အားနိသင်ကို လျော့သွားစေပါသည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Podophyllum Resin (ပိုဒိုဖိုက်လန် ရီစင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Podophyllum resin က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Podophyllum Resin (ပိုဒိုဖိုက်လန် ရီစင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Podophyllum resin ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Podophyllum Resin (ပိုဒိုဖိုက်လန် ရီစင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကြွက်နို့ဖြစ်သောနေရာကို သန့်စင်အောင် ဆေးကြောပါ။
ဆေးလိမ်းသည့်ပစ္စည်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မလိုအပ်သောနေရာများကို ဆေးထိမိခြင်းမှ ရှောင်ကျဉ်နိုင်ပါသည်။ ဆေးလိမ်းပြီးလျှင် အခြောက်ခံထားပါ။ ပထမအကြိမ်လိမ်းပြီး ဆေးတည့်မတည့် မိနစ် ၃၀-၄၀ ခန့် စောင့်ကြည့်ပါ။
လူနာ၏ အနာအခြေအနေအပါ်မူတည်ပြီး ဒုတိယအကြိမ်လိမ်းပြီး ၁-၄ နာရီခန့်ထားပါ။
ကပ်လျက်ရှိသော ကျန်းမာသည့်အရေပြားများကို Patrolatum နှင့်ကာထားပါ။
ကလေးတွေအတွက် Podophyllum Resin (ပိုဒိုဖိုက်လန် ရီစင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Podophyllum Resin (ပိုဒိုဖိုက်လန် ရီစင်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Podophyllum resin ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Podophyllum resin ၂၅% ဆေးရည်
Podophyllum resin ကို လိမ်းဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက ဆရာဝန်ထံချက်ချင်း အကြောင်းကြားပါ။